Ciidamada Mareykanka oo si Rasmi ah u Bilaabay in ay ka Baxaan Afghanistan
Wajiga ugu danbeeya ka bixitaanka ciidanka Mareykanka ee dalka Afghanistan ayaa si rasmi ah u billaabmaya Sabtida maanta ah, tallaabadan oo billow u ah dhammaadka dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee uu Mareykanka galo, ka dib muddo 20 sano ah oo ay ciidamadiisu dagaal ka wadeen dalkaasi dhaca Koofurta Asia.
Madaxweyne Joe Biden ayaa horay u sheegay in 1-da bisha May oo maanta ku beegan ay tahay maalinta uu sida rasmiga ah u bilaabanayo soo guryo celinta ilaa 3,500 oo askari oo Mareykan ah iyo ka bixista 7,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada isbaheysiga NATO oo iyaguna qeyb ka ahaa duulaankii Mareykanka uu sannadki 2001-di ku qaaday Afghanistan.
Ciidamada ammaanka ee Afghanistan ayaa sabtidii heegan buuxa la geliyay si loo baajiyo weerar kasta oo ay suuragal ah in lala beegsado ciidamada Mareykanka ee dalkaasi ka baxaya.
“Mareykanku wuxuu si rasmi ah 1-da May u bilaabayaa ka bixitaankooda Afghanistan, waxaana laga yaabaa in Taliban ay sii kordhiso rabshadaha,” ayuu sii hayaha wasiirka arrimaha gudaha Hayatullah Hayat u sheegay taliyayaasha sare ee booliska, sida laga soo xigtay cajalad maqal ah oo la siiyay wariyeyaasha.
Muddo 20 sano ah ka dib, dagaalkaasi waxaa Mareykanka uga dhintay in ka badan 2,000 oo askari, waxaa sidoo kale uga baxday lacag ka badan 2 tiriliyan oo dollar.